Nyocha nke "Pedro na Onyeisi" | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
"Peter na Captain" otu n'ime akwụkwọ kachasị mma edere
Encarni Arcoya | | Ndị edemede, Aterlọ ihe nkiri
Onye nwuru anwu na nso nso a Mario Benedetti Ọ hapụrụ anyị n’etiti ọtụtụ aha ya obere ọrụ nke isiokwu ya bụ “Peter na Onyeisi”, bụ nke a na-ekwu maka ụdị egwuregwu ahụ n'agbanyeghị, dịka onye ode akwụkwọ n'onwe ya kwenyere, a mụghị ya n'echiche nke ịnọchite anya ya.
N'ime ya onye na-ata ahụhụ na onye a tara ahụhụ ha nwere nzukọ ihu na ihu nke na-ewe ọtụtụ oge nke onye na-ata ahụhụ nwere ọrụ nke ime ka ndị a tara ahụhụ kwuo okwu na nke ikpeazụ nke ịgbachi nkịtị ka ọ ghara ịrara ndị ibe ya nye. Echiche dịpụrụ adịpụ na-ekewa ma mkpụrụ edemede na n'agbanyeghị eziokwu ahụ na Captain nwere ikike dị elu, tebụl gbanwere na akụkọ ahụ niile.
Ma ọ bụ ya Pedro, ahụhụ, na-aghọta (ma ọ bụ na-eme ka onwe ya ghọta) na n'ezie ọ nwụọlarị, na ọ nweghị nke dị adị, na ọ naghị eme, na ọ nweghị ihe funahụrụ ya na ihe mgbu bụ ọnọdụ uche na ndị nwụrụ anwụ ha ata ahụhụ ka ọ bụrụ n'ụzọ ụfọdụ ọ ga-enwere onwe ya pụọ ​​n'ụdọ nke obi ọjọọ nke onye na-ata ahụhụ meere ya.
Ọzọkwa, dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi ... ọ kpebiri ịta onye na-ata ya ahụhụ ahụhụ site na ịpịgide nguzogide ya na iso ya metụ bọtịnụ aka nke uche na ọ dịghị onye metụrụ ...
Onwe ya, obu otu n'ime akwukwo m kacha amasị m ma echere m na o ga-aga nke oma ma oburu na o bu otu n'ime oru mmanye akwukwo ulo akwukwo di elu ... ọtụtụ iji mụta N'ahịrị nke nnukwu Mario, ka ọ zuo ike na udo, onye m na-ekele nke ọ bụla n'ime okwu niile ọ hapụgoro anyị dị ka ihe nketa na nnukwu ọrụ ya dị egwu.
1 Nchịkọta nke Peter na Captain
1.1 Nkebi nke mbụ
1.2 Akụkụ nke abụọ nke Peter na Captain
1.3 Akụkụ nke atọ
1.4 Anọ na akụkụ ikpeazụ nke Peter na Captain
2 Ihe odide nke Peter na onyeisi
Nchịkọta nke Peter na Captain
Ọrụ Pedro na onye isi ụgbọ mmiri nwere ike kewaa n'ime akụkụ anọ dị iche iche nke ọma, nke ihe omume na-abawanye na ebumnuche na enwere crescendo na ọrụ ahụ. Nke ahụ bụ, ọ na-achọ nke ahụ onye na-agụ ya ga-ahụ mmalite nke ọnọdụ ahụ na otu o si adịwanye njọ, na-atọ ụtọ. N'ụzọ dị otú a, Mario Benedetti na-amata onye na-agụ ya na egwuregwu ọ chọrọ igwu.
Akụkụ nke Peter na onyeisi ndị agha bụ:
Nkebi nke mbụ
N’akụkụ nke mbụ a, ị ga - ahụ onye protagonist, Pedro bụ onye a kpụ n’ọnụ ụlọ ịgba ajụjụ ọnụ. N’ebe ahụ ị hụrụ ya ka ekpudo ya isi ma kee ya agbụ ka ọ ghara ịgbapụ ma ọ bụ hụ ihe ọ bụla rue mgbe nwoke ọzọ batara n’ime ụlọ ahụ, nke a na-akpọ Captain.
Ebumnuche nke a bụ ịjụ ya ajụjụ ma nweta ozi ọ chọrọ. Ọ na-agwa Pedro na ihe mere ya, ihe ọ mụtara, abụrụla ihe dị nro ma dịkwa nro ma e jiri ya tụnyere ihe ga-echere ya ma ọ bụrụ na ọ kwadoghị, na-enwewanye ahụhụ na ntaramahụhụ siri ike. Ihe onye ọ bụla enweghị ike ibu.
Ọzọkwa, ọ na-adọ gị aka ná ntị na onye ọ bụla na-ekwu otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
Onyeisi ahụ na-anwa ime ka ya kwenye maka ezi ihe, na-ekpughere ya ihe niile nwere ike ime ma ọ bụrụ na ọ naghị, yana ime ka ọ ghọta na ọ bụ onye na-enweta ihe ọ bụla ọ chọrọ. Na na ọ masịrị akụkụ Pedro, ebe ọ maara na ha nwere mmasị na ha. Ọ bụ ụdị nweta ntụkwasị obi nke ọzọ.
Ma, ọ na-eyi ya egwu, ọ bụghị naanị n'ihi ya, kamakwa n'ihi nwunye ya. N’adịghị anagide ihe mgbu ma ọ bụ tinye ihe ọ kacha hụ n’anya n’ihe egwu, yana ịpụ n’enweghị ndị otu ya maara na ya rụkọtara ọrụ, ọ ga-ekpughere mmadụ anọ.
Ma ọ nweghị ihe ọ bụla ọ na-ekwu, ma ọ bụ n'ụzọ enyi ma ọ bụ n'ụzọ egwu, na-enyere onye isi ụgbọ mmiri ahụ aka, ebe ọ bụ na Pedro dara ogbi ma ọ zaghị mkparị ọ bụla.
Akụkụ nke abụọ nke Peter na Captain
Akụkụ nke abụọ nke egwuregwu ahụ na-enye Pedro ọzọ, na-etikwu ihe na mmekpa ahụ. Enwere onye isi ụgbọ mmiri ahụ, onye na-anwa ime ka onye mkpọrọ ahụ nwee ike ịza ya ihe ọ kwesịrị ịma. Ya mere, ọ na-ewepu mkpuchi ahụ, ihe na, na nke mbụ, na-adị mgbe niile.
Ọ bụ n'oge ahụ mgbe Pedro na-ekwu okwu, ebe ọ na-agwa ya na ya emebeghị ya mbụ n'ihi na ọ dị ya ka ọ bụ ihe ekwesighi iji hood ahụ zaa. Otú ọ dị, kama ịbụ ụjọ, ọ bụ ugbu a Pedro na-ajụ ajụjụ ndị Captain banyere ezinụlọ ya, nke ọ na-ewere dị ka ihe iyi egwu. Mgbe ọ hụrụ mmeghachi omume ahụ, Pedro jụrụ ọzọ otú ọ dị ya ịlaghachi n’ụlọ mgbe o gbusịrị ụmụ nwoke ndị ọzọ. Nke ahụ na-eme ka iwe ya wee daa na-eti ya ihe, n'agbanyeghị na, na Pedro, ọ chọrọ ime ka ọ bụ "otu n'ime ezigbo ụmụ okorobịa."
Mgbe nkeji ole na ole dajụọ, Onyeisi ahụ nwere ọmịiko na Pedro, na-ekweta na ọ na-ewute ya mgbe o mechara ihe, na-enwe olileanya na onye ahụ dakwasịrị ya na-akwụsị ịta ahụhụ tupu ntaramahụhụ na ntaramahụhụ ahụ dị njọ, nkọwa doro anya na-arịọ Pedro ka ọ kwụsị iguzogide ya.
Mgbe ịgbachi nkịtị, azịza Pedro mechiri akụkụ a.
Akụkụ nke atọ
Ọ na-eme ka ị mata Captain a na-adịghị agbanwe agbanwe, uwe ya agbachapụrụ, eriri ya apụtaghị. Jụọ ekwentị iji weghachite Pedro, onye na-egosi na ọ na-akawanye njọ ma nwee ọbara ọbara na uwe ya.
N’ikwere na ọ nwụọla, Onye isi ụgbọ mmiri ahụ abịakwute ya wee dọba ya n’oche. Ọ bụ n'oge ahụ mgbe Pedro gbapụrụ n'ọchị, cheta n'abalị ahụ, mgbe a na-ata ya ahụhụ na mkpalite ahụ, ọkụ ahụ wee pụọ ma ha enweghị ike ịkwụsị ya.
N'ịgbalị ime ka ọ laghachi n'eziokwu, Captain ahụ kpọrọ Pedro n'aha ya, nke ọ zara na ọ bụghị, mana na aha ya bụ Romulus (ọ bụ aha ya). Ọ nwụwokwa. You pụrụ ịhụ gbalịa ka onye ahụ gbalịrị ịgbanahụ ọnọdụ ahụ, nke na-eche na ọ nwụọla na na ihe mgbu niile ọ na-enwe bụ naanị n'echiche ya, mana na ọ bụghị eziokwu.
Mgbe esemokwu ya na Captain gasịrị, ebe ọnwụ na ara na-eweta nkụda mmụọ n'etiti ha, onye isi ala ahụ nwere nkụda mmụọ wee chee na ọ gaghị enweta ihe ọ bụla n'aka ya.
Nke ahụ bụ mgbe ọrụ gbanwere. Pedro malitere ịgwa Captain okwu, ebe onye ahụ malitere ịgwa ya okwu na nkwanye ùgwù ka ukwuu. Onyeisi ahụ megheere ya, na-ekwu maka nwunye ya, otu o si rụọ ọrụ dị ka onye na-ata ahụhụ na otu o si emetụta ndụ ya.
Mana ọ bụ Pedro kwughachiri na ọ nwụọla na ya enweghị ike ịgwa ya ihe ọ bụla.
Anọ na akụkụ ikpeazụ nke Peter na Captain
Pedro a etiri ihe na-anwụ anwụ fọrọ nke nta ka ọ pụta n'ala. Na onye ọsụsọ na-agba agba, enweghị eriri, jaket na ụjọ.
Ọ hụrụ mkparịta ụka sitere na Pedro onye, ​​na-eche echiche, na-eche na ya na-agwa Aurora okwu, n'agbanyeghị na ọ bụ naanị ya. Ọ bụ n'oge ahụ mgbe Onyeisi ahụ ghọtara nsogbu niile ọ na-eme site na ịta ndị mmadụ ahụhụ ọ na-ajụkwa aha, aha ọ bụla, iji gbalịa ịzọpụta ya, mana n'otu oge ahụ zọpụta onwe ya. Otú ọ dị, Pedro jụrụ ime otú ahụ, a ma ha abụọ ikpe na ọrụ ha.
Ihe odide nke Peter na onyeisi
Egwuregwu ahụ nwere naanị ihe abụọ: Pedro na Captain. Ọ bụ ihe dị ka ọnụ ọgụgụ abụọ na-emegide mmadụ na-eme ka esemokwu dịrị n'akụkọ ihe mere eme, kamakwa ha gbanwere ụzọ ha si eche echiche, a na-egbusi ha obere obere.
N’otu aka, ị nwere Pedro, onye mkpọrọ nke yiri ka ọ na-anabata ntaramahụhụ ya na-arịọghị maka ebere ma ọ bụ ịrịọ maka ndụ ya. O kwenyere n'echiche ya ma dị njikere ịgbachitere ha ọbụlagodi ndụ ya. N'ihi nke a, n'oge nyere aka na-eche na ọ nwụọla, na ihe ọ bụla na-eme ya bụ nsonaazụ nke naanị uche ya.
N'aka nke ọzọ, enwere Captain, otu n'ime ihe odide na-agbanwe karịa egwuregwu niile. Ọ na - ebido dị ka onye nwere ikike nke na - achọ ka ya na onye ọzọ nwee mmekọrịta site n’ikpughe ihe niile ga - eme ya ma ọ bụrụ na ọ kwadoghị, mana n’otu oge ịnwa ịme “enyi” ka ọ mee.
Agbanyeghị, ka akụkọ a na - agbanwe, agwa a na - eme kwa, na - amata na ọ nweghị mmasị na ọrụ ya, na - akọ akụkụ ụfọdụ nke ndụ ya nke mere ka ọ dị umeala n'obi n'agbanyeghị ahụhụ ọ na - ata ndị ọzọ. N'ihi ya, ọ na-achọ ka o gosi na ihe o mere ziri ezi. Nsogbu bụ na Pedro anabataghị ya, ọ naghị enwe ọmịiko na ya, nke a kpasuru Captain ahụ iwe n'ihi na, ọbụna na-ekwupụta, ọ na-aga n'ihu na-enweghị onye nke ọzọ na-eme ihe ọchọrọ n'ezie, ikwupụta.
N'ụzọ dị otú a, a na-ahụ evolushọn nke ndị odide ahụ. N'otu aka, nke Pedro, onye na-ahapụ onwe ya ka ara na ọnwụ mara na ọ gaghị esi ebe ahụ pụọ ma ọbụlagodi na ọ gaghị ekwu ihe ọ bụla. N'aka nke ọzọ, nke Captain, onye nọ n'ọrụ ahụ na-anọgide n'amaghị ihe ga-abụ ọdịnihu ya.
Want chọrọ ịgụ ya? Zụrụ ya ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » "Peter na Captain" otu n'ime akwụkwọ kachasị mma edere
"Ebe nchefu bi"